na ku saabsan - Shijiazhuang saratoosiyaha Tools Co., Ltd
Diamond arkay daab
Sintered Diamond Blades arkay
Laser welded Diamond Blades arkay
Diamond shiidi & Tools nadiifinayo
Diamond Cup Wheels (Sintered)
PCD Cup Wheels / PCD
Diamond Plate shiidi (Brazed)
Diamond Shoes shiidi (Brazed)
Shijiazhuang saratoosiyaha Tools Co., Ltd waxa uu ku yaalaa qalabka saldhig saarka ee Shijiazhuang. Tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2003dii, Tools saratoosiyaha ayaa laftiisa huray horumarinta iyo soo saaridda qalabka diamond. Kala duwan oo soo saarka wuxuu daboolayaa diamond wareeg garbaha miinshaar, giraangiraha shiidi doona, kabaha ku shiidi, pads qiraan, gelinno daloolin muhiimka ah iwm Tools saratoosiyaha ayaa network iibka ah oo daboolaya 30 gobolladiisa ee Shiinaha, iyo dhoofinta in North America, Europe, Oceania iyo gobollada kale. Ka sokow ay brand u gaar ah, Tools saratoosiyaha la shaqeeyaa macaamiisha badan oo ganacsi OEM ama OEM. Ka dib markii sano ee horumarinta degdeg ah, Tools saratoosiyaha hadda waa mid ka mid ah soo saarayaasha Chinese hoggaamineed qalabka dheemman, iyo waxa uu ku guuleystay sumcad wanaagsan la soo saarka oo tayo sare leh oo ay gacanta ku tayo adag.
Tools saratoosiyaha daboolayaa meel ka mid ah 20,000 oo mitir oo laba jibbaaran, iyadoo R xirfadeed & D, QC, kooxda Production, iyo Sales iwm, tirada guud ee shaqaalaha ka badan 150. workshop waxay leedahay wax soo saarka iyo baaritaan goobaha lagu kalsoonaan karo si toos ah ama semiautomatic, oo ay ku jiraan line sintering, line brazing, line alxanka laser , analyzer engegnaantiinna aawadeed, analyzer cufnaanta, inaad ahaatid dheelitirka, beerta imtixaanka iwm
Sannad kasta Tools saratoosiyaha maalgashiga 10% ka mid ah ay dakhliga sanadlaha ah ee R & D. Kooxda The R & D waxay leedahay waayo-aragnimo ah celcelis ahaan in ka badan 10 sano, oo waa inay awoodaan inay si deg deg ah uga jawaabaan codsi kartoo. The R & D injineerada yaqaanaan shuruudaha codsiga kala duwan ee qalabka diamond, kaas oo u saamaxaya in ay bixiyaan macaamiishu hanuun farsamo xirfadeed, talo design iyo tababar hawlgalka.
Shirkadda waxay leedahay nidaamka tayada fiican ah, oo ay ku jiraan IQC, IPQC, FQC, adeeg-iib aheyn ka dib iwm, in la hubiyo in macaamiisha oo dhan helaan oo kaliya wax soo saarka oo tayo sare leh. Iyada oo ay gacanta ku document adag, sirta waraaqaha farsamo iyo macluumaadka macaamiisha aad loogu balan qaadayo.
Tools saratoosiyaha, badeeco lagu kalsoonaan karo oo qalab diamond. Ku soo dhawow our warshad, iyo ku hayaa wada shaqeyn aad la!
warsidaha our todobaadle ah
Douyu Industrial Park, Degmada Luancheng, Shijiazhuang 051430, Shiinaha
links muhiim ah